Faah faahin:- Bam gacmeed caawa lagu weeraray guriga gudoomiyaha degmada Hodon – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Bam gacmeed caawa lagu weeraray guriga gudoomiyaha degmada Hodon
Waxaa faah faahin dheeraad ah laga helayaa Bam gacmeed caawa lagu weeraray guri uu xaafadda KPP ee degmada Hodan ka degan yahay guddoomiyaha degmadaasi Axmed Salaad Ibraahim, iyadoona weerarkaasi kadib goobta laga maqlay rasaas dhaceeysay.
Guddoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Axmed Salaad Ibraahim oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in xilliga gurigiisa la weeraraayay uu ka maqnaa, balse uu dhaawac fudud kasoo gaaray seddax ka mid ah ilaaladiisa.
Kooxdii falkaasi weerarka ah geysatay ayaa goobta isaga baxsaday, waxaana islamarkiiba goobta soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad-sugidda qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo halkaasi baaritaano ka sameeyay.
Ilaa iyo haatan ma jirto cid baaritaanadaasi lagu soo qab-qabatay, waxaana weerarkaan la aaminsan yahay inay ka dambeeyeen Xarakada Al-shabaab, inkastoo aysan weerarkaasi weli sheegan.
Si kastaba ha ahaatee, weerarkaan caawa lagu qaaday guriga gudoomiyaha degmada Hodan Axmed Salaad Ibraahim ayaa kusoo beegmaya xilli maalintii shalay weerar ismiidsaamin ah lagu qaaday gaari uu la socday Allaha u naxariistee Jeneraal Maxamed Jimcaale Rooble oo loo yaqaanay Goobaale, kaas oo ka tirsanaa taliyeyaasha guutadda seddaxaad ee ciidanka xooga dalka Soomaaliyeed.